Onye na-ekesa mmiri → Ogige • •lọ egwuregwu • Warsaw bọọlụ
Need chọrọ onye na-enye mmiri, ihe ọ drinkụ drinkụ na ogige ma ọ bụ ebe egwuregwu? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
A na-enyocha ịdị mma nke mmiri ọ drinkingụ byụ nke a na-anya mmiri na Poland site na ụlọ ọrụ ịdị ọcha na nke ọrịa, nke na-ekwe nkwa na mmiri na-erute ndị nabatara maka oriri.
Ndị ọkachamara kwenyere na ọtụtụ obodo Poland nwere ike ịnya isi ha na mmiri pọmpụ mara mma ma dị mma. mmiri Nke a dị ọcha, enweghị nsị microbiọlọji na obere minralized, yabụ ị nwere ike ị drinkụ ya n’atụghị egwu.
Nke a bụ ụdị mmiri na-asọ site na isi iyi na isi iyi nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, nke zuru oke maka ebe ọha, dịka ogige, ogige, ubi, ebe egwuregwu na osimiri.
N’inye uzo mmiri ọ drinkingụ inụ dị mma n’obodo, ekwesịrị ị speciala ntị na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ogige ntụrụndụ obodo, ebe egwuregwu na ebe egwuregwu niile, ebe mmụba ndị mmadụ na-eji ha eme ihe na-achọwanye mmiri dị mma. mmiri.
Childrenmụaka na ndị nọ n’oge uto, karịchaa n’oge mmega ahụ siri ike, chọrọ nnukwu mmiri nnukwu. Ya mere, site na ịwụnye isi iyi mmiri ọ drinkingụ inụ n’ebe a na-egwu ụmụaka, yana n’ebe a na-egwu egwuregwu, ị nwere ike inye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị ụtọ, nke ga-abụ ihe mgbakwunye nke mmanya ndị na-adịghị mma.
Uru ọzọ nke ndị na - a externalụ ihe ọ externalụ externalụ bụ ohere nke iwepụ karama plastik na ịkpụzi banyere ịmara banyere ndị na - eto eto.
Mpaghara ntụrụndụ, n'ámá, ogige na ogige egwuregwu bụ ebe isi iyi na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ kwesịrị ịdị, nke na-abụghị naanị ime ka akpịrị kpọọ gị nkụ, kamakwa ịchọ mma a.
Isi iyi nke mmiri na-a allowụ mmiri na-enye ohere maka ịdị ọcha ma na-akpọ nkụ ozugbo, imewe ihe ọgbara ọhụrụ na-emesi ike banyere oghere ahụ.
Ọ dị mkpa ịkụziri ụmụaka site na mgbe ha bụ nwata na mmiri nke isi iyi na isi iyi nke mmiri ọ isụ isụ bụ maka ị drinkingụ naanị na na aka ma ọ bụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu ekwesịghị ịsa ya.
Karịsịa n’oge ọkọchị, ndị ọbịa niile na-agagharị n’ogige ma ọ bụ ndị sonyere n’ihe omume na ihe omume egwuregwu a na-eme n’ebe a na-enwe egwuregwu ga-enwe ekele maka eziokwu ahụ bụ́ na ha nwere ike iji mmiri na-enye ume ọhụrụ ma na-enye ume ọhụrụ kpochapụ akpịrị ịkpọ nkụ ha.
Ingwụnye ngwaọrụ ndị na-eme ka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ nke mmiri ọacesụ freeụ dị ukwuu na-abawanye na ebe ndị mepere emepe na-esiwanyewanye ike, ọ bụghị naanị na Poland, kamakwa n'ọtụtụ mba Europe. Ndị na-a waterụ mmiri dị mma ma dị mfe iji, yabụ ụmụaka, ndị na-eto eto, ndị okenye na ndị agadi nwere ike iji ha nke ọma mgbe ọ bụla ha chọrọ. Nwere ike drinkụọ mmiri ozugbo, jupụta karama mmiri gị ma ọ bụ nnukwu nkịta.
Longer gaghị adị mkpa iburu karama mmiri dị ka mmiri dị mma ma na-enye ume ọhụrụ dị nso. Ndị na-enye mmiri na-enyekwa aka na-elekọta gburugburu ebe obibi site na iwepu ihe mkpofu ahịhịa.
Mmiri isi iyi a na-a inụ mmiri a na-etinye n’ogige ntụrụndụ na n’ebe a na-egwu egwuregwu dị iche iche na-ewu ewu karịa n’ihi ịdị mfe ha na iji ha na ịdị ọcha.
mmiri dị ọcha na ogigemmiri doro anya n'ime ogigemmiri n’efuisi iyi na ogigemmiri iyipitniki na ogigena-a inụ mmanya na ogigemmanya na ogigemmiri n’ime ụlọ egwuregwummiri n’ime ogige ntụrụndụmmiri ọ inụ inụ na ogigemmiri n'ime ogigeoge opupu ihe ubiagba mmiri n’ogige